Vashandi vezvipatara veU.S. vanosiya amburenzi muguta reChinese pakati pekupokana - teles
Vashandi veAmerica vekudyidzana vanosiya muhofisi weChinese muguta vachipokana
By bryamangwanabe On Juil 28, 2020
Vashandi vehurumende vekuUnited States vakasiya nhume yavo muguta reChinese kuChengdu mushure mekudzingwa kwemaawa makumi manomwe nenomwe.
China yakachaira kudzima ikapindura kuvharwa neUnited States kubva kuChinese Consadors muHouston, Texas, svondo rapfuura.
Nguva yemuvhuro isati yasvika, vashandi vakaonekwa vachibuda muchivako, danda rakabviswa uye mureza weAmerica wakadzikiswa.
Sangano reChinese rekunze rakataura kuti vashandi veChinese vakapinda muchivako mushure menguva yekufa uye "vakatora."
Mutauriri webazi reUS State vakati, "Mumiriri uyu anga ari pakati pekudyidzana nevanhu vekumadokero kweChina, kusanganisira Tibet, kwemakore makumi matatu nemashanu.
"Hatina kufara nesarudzo dzeChinese Communist Party uye tichaedza kuenderera mberi nekuzivisa vanhu mune ino nzvimbo yakakosha kuburikidza nezvimwe zviga zvedu kuChina. "
Sezvo US Consulate yakavhara, vagari vemunharaunda vakaungana panze, vaine mireza yeChinese mizhinji uye kutora selfies.
Iwo weChinese mushopu uyo ​​akavhima pa LinkedIn
NeChitatu chapfuura, United States yakaraira kuvharwa kwemumiriri weChinese muHouston, ichiti yaive chipenga chekushushikana nekuba kwezvinhu.
Kunetsana kwakawedzera pakati penyika mbiri pamusoro penyaya dzakawanda.
Kutungamira kweMutungamiriri wenyika yeAmerica, VaDonald Trump, kwagara kuchinetsana muBeijing pamusoro pekutengeserana nedenda reCorononavirus
Washington yakashorawo kuisirwa neChina mutemo wechengetedzo mutsva muHong Kong
Vhiki yapera, Singaporean anokwidza mhosva yake mudare reUS nekushanda semuumiriri weChina
Zvakare svondo rapfuura, zvizvarwa zvina zveChinese zvakatongerwa mhosva dzakasiyana muUS visa yevanopomerwa kureva nhema nezve rebasa ravo muchiuto cheChinese.
muzvinambiriVashandi vakatanga kubvisa diplomatic plaque kubva kumumiriri weUS Svondo
Chii chakaitika muChengdu?
Chinese media enhau yakaratidza mafoto emarori akasiya amburenzi nevashandi vachibvisa mabheji pachivako.
NeMuvhuro mangwanani, nhepfenyuro yeCCTV yakatumira vhidhiyo yekubviswa kwemureza weAmerica.
Mazana emapurisa ekuChina akaiswa kunze kwechivako, achikurudzira vaiona kuti vapfuurire mberi.
Nekudaro, boos yakanzwika apo bhazi rine ma tiles windows rakabuda muchivako neSvondo, AFP yenhau inoshuma.
Vamiriri veChina pavakasiya basa ravo muHouston svondo rapfuura, vakasekwa nevaratidziri.
Nei China yakasarudza kuvhara mumiriri weUS kuChengdu?
Svondo rapfuura, Hofisi Yezvekunze yakataura kuti kuvharira yaive "yepamutemo uye yakakosha mhinduro" kumatanho akatorwa neUnited States.
"Vakadzi vemuAfrica vatumira kudzoka"
MaGunmen anouraya vanhu vanosvika makumi maviri nevaviri kuchamhembe kwakadziva kumadokero ...
Vazvipiri vemuMauritius vanopopota kuti vasiye mafuta apera
Vashandi vekuChitungwiza vaive "vachiita zviitiko zvisingakwanisi kugona kwavo, vachipindira mune zvemukati menyaya dzeChina uye vachiisa panjodzi kuChina nezvido zvavo," chirevo chakadaro.
Iyo Chengdu Consate, yakagadzwa muna 1985, yaimiririra zvido zveAmerica munzvimbo yakakura kumaodzanyemba emadokero kweChina.
Mumiriri aionekwa sewakakosha nekuti aigonesa United States kuunganidza ruzivo nezveTibet, uko kwakave nekumanikidzwa kwenguva refu kusununguka. Mapoka anorwira kodzero agara achipomera China mhosva yekushora chitendero nekushungurudza kodzero dzevanhu muTibet, izvo zvinorambwa neBeijing.
Neindasitiri yayo inokura nebasa revashandi, Chengdu anoonekwa zvakare neUnited States ichipa mukana wekutengesa kunze kwenyika zvigadzirwa zvekurima, mota nemishini.
muzvinambiriMapurisa aichengetedza nzvimbo dzevaiona
Ruzhinji rwevashandi vanopfuura mazana maviri vezvibvumirano zvehunyanzvi vakatumirwa kumusha.
Kuvhara kwacho kunosiya United States nevanhu vana munyika huru China uye mumiriri muguta guru Beijing. Iyo ine zvakare mumiriri muHong Kong.
Chii chakaitika muHouston svondo rapfuura?
China yakarasikirwa nebasa rayo muHouston svondo rapfuura, asi ichine mamwe mana echibvumirano muUnited States uye mumiriri muWashington DC.
Mushure mekutora maawa makumi manomwe nemasere ekuti vamiriri veChinese vasiye mumiriri weHouston nemusi weChishanu zvapera, vatori venhau vakaona varume vakaita sevakuru veU.S. vakamanikidza musuwo muzvivakwa.
Nhoroondo yevhidhiyoVarume vanoshandisa hose uye kuvhara matangi emarara paChinese Consadors muHouston
Munyori weUnited States, VaMike Pompeo, vanoti Washington yakaita nekuti Beijing "aiveba" huchenjeri.
Mutauriri weChinese Kunze kwenyika, VaWang Wenbin vakapindura kuti danho reUS raive pamusoro pe "mishmash yenhema dzinopesana neChina."
Nei paine kusawirirana pakati peChina neUnited States?
Pane zvinoverengeka zvezvinhu zviri panjodzi.Makuru eUS apomera China nekupararira kwepasi rose kweCovid-19. Kunyanya, Mutungamiri Trump akapomera, pasina umboo, kuti hutachiona hunobva murabhoritari yeChinese muWuhan.
Uye, mumataurirwo asina kutaurwa, mutauriri weChinese Kunze kwenyika akataura munaKurume kuti mauto eUS angave akaunza hutachiona kuWuhan.
United States neChina dzakavharirwawo muhondo yemutero kubva muna 2018.
VaTrump vakambopomera China mhosva yekuita zvisiri pamutemo kutengesa uye kuba zvinhu,
United States yakaisawo zvirango kune vezvematongerwo enyika veChina avo vavanoti ndivo vane mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vanopokana neMuslim mashoma eXinjiang. China inopomerwa mhosva huru dzekumanikidza, kutambudza chitendero, uye kumanikidza sterilisization yeIyeghurs nevamwe.
Beijing anoramba zvaari kupomerwa uye akapomera United States "kupindira kunoshamisa" mune zvemukati zvemukati.
Kururamisa: Ichi chinyorwa pakutanga chakabatanidza mepu yakanga isina kukodzera uye yakatsiviwa.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53549155
Heano maitiro eChinese Agent Akashandisa LinkedIn Kuti Uwane Tangi
Covid-19: IMF inobvumidza chikwereti chemadhora mabhiriyoni mazana mana neshanu kuSouth Africa
"Vakadzi vemuAfrica vatumira kudzoka" mushure mekuputika muBeirut
MaGunmen anouraya vanhu vanosvika makumi maviri nevaviri kuchamhembe kwakadziva kumadokero eNigeria
Ichi ndicho chikonzero United States inotarisira "aval"